“ချစ်သူကို ပွေ့ဖက်ခြင်းက ဖျားနာနေတာကိုပင် ပျောက်ကင်းနိုင်ဟုဆို” - MDY News
“ချစ်သူကို ပွေ့ဖက်ခြင်းက ဖျားနာနေတာကိုပင် ပျောက်ကင်းနိုင်ဟုဆို”
August 1, 2020 Aung Lay Knowledge 0
ချစ်သူတွေ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ပွေ့ဖက်လိုက်ရင် ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာ ဖော်ပြ ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်
၁။ ယုံကြည်မှု ရှိစေပါတယ်။
ချစ်သူစုံတွဲတွေ ကြားထဲမှာ နွေးထွေးမှု ၊ လုံခြုံမှု ၊ ထပ်တူကျမှု နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု တွေဟာ အရေးပါလှတဲ့ အချက်တွေပါပဲ။
မကြာခဏ ချစ်သူနှင့်ပွေ့ဖက်ခြင်းက သင့်အတွက် စိတ်ဓာတ်ခွန်အားနှင့် ချစ်သူနှစ်ဦး သံယောဇဉ် ပိုမိုခိုင်မာလာစေတဲ့ အချက်ပါပဲ။
၂။ နွေးထွေးမှုကို ရရှိစေပါတယ်။
ဒီအချက်က အဓိကရိုးရှင်းပြီး လူတိုင်း ပွေ့ဖက်ခါနီး ပြောကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင် အအေးဓာတ်ပိုလာတဲ့ အခါမျိုးမှာ အနားမှာ ရှိနေတဲ့ချစ်သူကို ထွေးဖက်ထားမိမှာ အသေအချာပါပဲ။ အကြောင်းပြချက်က ရှင်းပါတယ် သင်တို့နှစ်ဦးစလုံး နွေးထွေးမှု ရရှိစေဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ စိတ်ဆိုး စိတ်ကောက်ပြေစေပါတယ်။
ချစ်သူတွေ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အရမ်းချစ်နေပေမဲ့ စကားများရန်ဖြစ်နေပါသလား။ စကားများတဲ့ ကိစ္စပြဿနာကို ဆက်ရှင်းနေရင် စကားထက်များနေရဦးမှာပါပဲ။
ဒီတော့ ဘာမှမပြောပဲ ၅မိနစ်လောက် ပွေ့ဖက်ထားလိုက်ပါ။ စိတ်ဆိုး စိတ်ကောက်ခြင်းတွေ တဖြည်းဖြည်း ပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ပွေ့ဖက်ပြီးတော့မှ ချစ်သူကို ဆက်ပြီး ချော့လိုက်ပါ။
၄။ အထီးကျန်ခြင်းကို ပြေပျောက်စေပါတယ်။
တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်နေချိန်တွေမှာ အထီးကျန်တယ်လို့ သင်ခံစားဖူးမှာပါ။ ဒီအချိန်မျိုးဆို သင်ထွေးပွေ့ထားချင်တဲ့ ရင်ခွင်နှင့် လက်တစ်စုံကို တမ်းတနေမိမှာ အမှန်ပါပဲ။
အချိန်တွေခွဲခွာပြီး ပြန်တွေ့ဆုံတဲ့အခါ ထွေးပွေ့ ဖက်တွယ်ထားခြင်းက အထီးကျန်မှုကိုလည်း ပြေပျောက်စေပါတယ်။
၅။ ပိုမို စိတ်လှုပ်ရှားစေပါတယ်။
ဘယ်လိုအချိန်တွေမှာ စိတ်လှုပ်ရှားတတ်တယ်ဆိုတာ သင်သတိထားမိမှာပါ။ သင့်ချစ်သူက Surprise တစ်ခုခုလုပ်ရင်း သင့်ကို ပွေ့ဖက်ထားမယ်။
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပွေ့ဖက်ထားပြီး စားကြမယ်၊ သွားကြမယ်လို့ သဘောတူစကားပြောထွက်လာတဲ့ အချိန်တွေဆို သင် အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားပြီးပျော်ရွှင်နေမှာ သေချာပါတယ်။
၆။ အပျော်တွေ တိုးပွားလာစေပါတယ်။
သင်ပျော်ရွှင် နေတဲ့အချိန်မှာ သင်ချစ်သူကို ဖက်ထားခြင်းက အချစ်တန်ခိုးနဲ့ အပျော်တွေ နှစ်ဆတိုးစေမှာပါ။ ဥပမာပြောရရင် အောင်စာရင်းကြည့်ပြီး အောင်တယ်လို့ သိလိုက်ရချိန် ဘေးမှာရှိတဲ့ ချစ်သူကို ပွေ့ဖက်လိုက်ရရင် အပျော်တွေ ဆက်တိုက်တိုးပွားလာမှာပါ။
အောင်မြင်မှုတစ်ခုတစ်ခု ရတိုင်း ချစ်သူကို ပြေးဖက်ထားဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်!
၇။ ပွေ့ဖက်ထားခြင်းက ဖျားနာခြင်းပင် ပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်။
ကျန်းမာရေးအရပြောရရင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ဖက်ထားချိန်မှာ ကိုယ်တွင်းလှုံဆော်မှုများစွာဖြစ်စေပြီး သွေးဖြူဆဲလ်များ (white blood cells) ထုတ်လွတ်မှုအား ကောင်းစေပါတယ်။ သွေးဖြူဆဲလ်များဟာ ရောဂါ နှင့် အခြား ဗိုင်းရက်စ် ( viruses) တွေကို တိုက်ဖျက်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
၈။ စိတ်ဓာတ်ခွန်အား တိုးလာစေပါတယ်။
ကလေးဘဝတည်းက အားငယ်ချိန်တိုင်း အဖေနဲ့အမေကို ဖက်ထားမိကြတယ်။ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားကျဆင်းချိန်မှာ တစ်ယောက်ယောက်ကို ဖက်ထားပြီး ငိုကျွေးလိုက်တာမျိုး ၊ စိတ်ပြေတဲ့အထိ ဖက်ထားမိတာမျိုးပေါ့။
တကယ်လဲဟုတ်ပါတယ်။ အဲလိုအချိန်မျိုးဆို ချစ်တဲ့သူတစ်ယောက်ကို
ပွေ့ဖက်ထားခြင်းက လျော့ကျနေတဲ့ စိတ်ခွန်အားကို အကောင်းဆုံးပြန်လည် မြှင့်တင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ချစ်သူ အားငယ်ချိန်တိုင်းလဲ ဖက်ထားပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်……
သင့်ကို ယုယုယယ ပွေ့ဖက်ပေးမယ့် ချစ်သူတစ်ယောက် ပိုင်ဆိုင်ထားပြီလား????
မောင့်ချစ်သူ ဗမာမလေး ဆို လာတဲ့ အရမ်းလှတဲ့ “မျက်ဝန်း”
အောင်ဘာလေ ထီဆုကြီး (၂)ဆု တောင် ကံထူး ခဲ့လို့ ပျော်နေတဲ့ မေကဗျာ